SomaliTalk.com » War saxaafadeed kasoo baxay golihii wasiirada oo uu shirgudoominayey Reysal wasaare Cabdiweli Gaas.
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Thursday, November 24, 2011 // Jawaabaha waa la xiray
Shir ay maanta isagu yimaadeen Golaha Wasiirada oo uu shir guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali ayaa waxaa looga hadlay arrimaha amniga, waxqabadka Xukuumadda, mataaneynta booliiska iyo wasaaradaha dowladda, iyo adeegyada bulshada.
Ugu horreyntii guddiga heerka wasiir ee amniga ayaa warbixin buuxda siiyey golaha sheegayna in amniga caasimadda wax badan laga qabtay oo hay’adaha amniga ay si wanaagsan u waddaan qorshaha xasilinta caasimadda dalka. Waxey kaloo xuseen inay jiraan caqabado u baahan in wax laga qabto iyagoo golaha u soo bandhigay talo soo jeedin ku wajahan sidii loo horumarin lahaa amniga oo ay shacabka iyo hay’adaha amniga ay uga wada shaqeyn lahaayeen soo celinta amniga iyo xasilinta dalka. Golahu waxey oggolaadeen dhammaan talooyinkii la soo jeediyey, waxeyna ku ammaanaan hay’adha amniga iyo maamulka gobolka dadaalada cusub ee bulshada soomaaliyeed looga qeybgalinayo qorshaha soo celinta amniga iyo bilicda magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka codsaday dhammaan wasaaradaha inay soo gudbiyaan waxqabadkooda oo shacabka soomaaliyeed loo sheego waxii qabsoomay, si ay u timaado isla xisaabtan dhab ah. Golaha ayaa isku raacday in muddadii ay Xukuumaddan jirtay ay suurtogelisay in waxbadan laga qabtay dhinacyo fara badan, sida amniga oo caasimadii laga saaray Al-Shabaab, oo shacabku ay si xor ah u socdaan habeen iyo maalin, isla markaana ay goobihii ganacsiga dib u furmeen, shacabkana ay si xowli ah u wadaan dayactirka guryahooda iyo goobaha ganacsiga oo bilicdii magaalada dib u soo celinaya. Waxaa kaloo wax laga qabtay xoojinta xiriirka maamulada dalka iyo Dowladda Federaalka ah oo maanta ay marayaan heer aad u wanaagsan, sidoo kale xiriirka joogtada ah iyo wada shaqeynta laga wada shaqeynayo Roadmap ka ayaa iyadana ah horumar cusub una baahan in la joogteeyo.
Arrimaha Gar-gaarka bani’aadanimo ayaa iyadana aheyd waxyaabihii ay xukuumaddan horumarka weyn ka sameysay, maantana ay mareyso heer laga fikiro mashaariic loo sameeyo shacabka si ay guryahooda ugu laabtaan oo ay nolol cusub u sameystaan. Waxa kaloo la suurto geliyey in arday fara badan loo qaaday waxbarasho dibedda ah oo la filayo inay mustaqbalka dadkooda iyo dalkooda wax u tari doonaan. Arrmaha kale ee horumarka laga sameeyey ayaa lagu sheegay inay yihiin dib u soo nooleyntii adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo nadaafadda caasimadda oo si xowli ah u socda. Ra’iisul Wasaaraha ayaa codsaday in muddo 10 cisho ah wasaarad walba ay ku soo gudbiso waxii u qabsoomay, isla markaana shacabka lala wadaago oo isla xisaabtan dhab ah uu u dhaco.
Ugu danbeyntii Golahu waxey warbixin ka dhageysteen Taliye Ku Xigeenka Booliska Soomaaliyeed General Saacid oo ka warbixiyey xaaladda guud ee Booliiska iyo horumarka baaxadda leh oo ay ka sameeyeen caasimada dalka oo ay suurto geliyeen soo celintii xasiloonida iyo amniga. Warbixinta Taliye ku xigeenka ka dib Golahu waxey isku raaceen in wasaarad walba lagu mataaneeyo Saldhigyada Booliska ee Muqdisho, isla markaana la isla gartay in 20 December ay noqoto maalin wasaarad walba lagu qiimeeyo sida ay ula shaqeeyeen Saldhiga Booliska lagu mataaneeyey oo warbixin buuxda laga sugayaa. Wasiirada waxaa laga rabaa inay degmooyin kala shaqeeyeen sidii shacabka iyo Dowladda la isagu xiri lahaa oo horumar fara badan looga sameyn lahaa dhanka adeegyada bulshada.